Life Style – DigitalTimes.com.mm
ဒီတစ်ပတ် TGIF အတွက်ကတော့ အသောက်တစ်လိုင်းလေးတွေအတွက် သီးသန့်ပေါ့. ဘားသွား ဆိုင်ထိုင်သောက်ရမှာပျင်းလာပြီ အိမ်မှာတင်အေးဆေးသောက်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ Vodka တစ်ပုလင်းရှိရုံနဲ့ ကိုယ်တိုင် ကော့တေးလ်အလွယ်တကူလုပ်နိုင်တဲ့ Vodka cocktail ၁၀မျိုးကို ဖော်ပြပေးချင်ပါတယ်။ (Maple…
တစ်ပတ်တာရဲ့အမောတွေ ခဏနားရတော့မယ့် သောကြာနေ့ရောက်လာပြန်ပါပြီ။ ဒီတစ်ပတ် TGIF မှာရော ဘာတွေလုပ်ဖို့အစီအစဉ်ရှိကြလဲ? စုံတွဲလေးတွေကတော့ သေချာတယ် ဒိတ်လုပ်ကြမှာပေါ့။ ဒါပေမယ့် Single တွေအတွက်တော့ သောကြာနေ့ညက ထူးမခြားနားဖြစ်နေသလို အထီးကျန်ကောင်းလည်းကျန်နေပါလိမ့်မယ်။…
Ed Sheeran ရဲ့နာမည်ကြီးလူကြိုက်များခဲ့တဲ့ သီချင်းကောင်းလေးတွေ
အဆိုတော်၊ သီချင်းရေး၊ ဂစ်တာတီး၊ ပရိုဂျူဆာ၊ သရုပ်ဆောင် တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ Edward Christopher Sheeran ကတော့ သီချင်းကောင်းလေးတွေနဲ့တူတူ ဒီနေ့ခေတ်လူငယ်တွေကြား ရေပန်းစားနေပါတယ်။ အသက် ၄နှစ်အရွယ်ကတည်းက ဘုရားကျောင်းမှာသီချင်းတွေဆိုခဲ့ပြီး…
Life Style NEWS TV & Home Entertainment
၄၉ လက်မ display ကွေး၊ resolution အမြင့်တွေနဲ့ Asus ရဲ့ ဂိမ်းမော်နီတာအသစ်
ဂိမ်းကစားတဲ့အခါ တစ်ချို့တီဗီတွေထက်ကို ပိုကြီးတဲ့ ဂိမ်းမော်နီတာကြီးနဲ့ဆော့ဖို့ စိတ်ကူးမယဉ်ကြည့်မိဘူးလား?? ဒီအတွက် Asus ကနေ ရွေးချယ်စရာတစ်ခု ထပ်တိုးလာခဲ့ပြန်ပါပြီ။ တနင်္လာနေ့ တိုင်ပေမှာကျင်းပခဲ့တဲ့ Computex မှာ Asus က…
Calvin Harris နဲ့ Dual Lipa တို့ရဲ့ “One Kiss” သီချင်းလေးကတော့ Billboard ရဲ့ Dance Club Songs သီချင်းတွေ Dance/Mix…
ဘယ်တော့မှမရိုးသွားတဲ့ တစ်ခေတ်တစ်ခါကနာမည်ကြီးခဲ့တဲ့ ဂိမ်းကောင်းလေးတွေ
ဒီတစ်ပတ် TGIF မှာတော့ အိမ်ထဲမှာအောင်းပြီးဂိမ်းဆော့မယ်တွေးထားတဲ့သူတွေအတွက် တစ်ချိန်တစ်ခါကနာမည်ကြီးခဲ့တဲ့ ဆော့လို့လည်းမရိုးနိုင်တဲ့ ဂိမ်းကောင်းလေးတွေကို ဖော်ပြပေးလိုက်တယ်နော်။ 😉 အားလုံးလည်း ဆော့ဖူးတဲ့သိပြီးသားဂိမ်းတွေပဲဖြစ်လို့ ရှည်ရှည်ဝေးဝေးကြီးတော့ မပြောတော့ပါဘူး Subway Surfers သူကတော့…
Life Style Tech Update
Cashier မလိုပဲဈေးဝယ်လို့ရမယ့် Amazon Go Store
Amazon Go နဲ့ဒီနေ့ခေတ် ကုန်စုံစတိုးတွေနဲ့မတူချက်ကတော့ တစ်လမ်းစီလိုကိုဖြစ်သွားပါပြီ။ Amazon Store မှာ Cashier မလို ဘယ်မှာမှ register လုပ်စရာမလို credit card ဘာညာထုတ်စရာမလိုပါဘူး။…
တစ်ရက်အတွင်းတည်ဆောက်ထားတဲ့ 3D printed House
3D Printing Company တစ်ခုဖြစ်တဲ့ ICON နဲ့ နေအိမ် မရှိသူများအတွက် အိမ်များ ပံ့ပိုးပေးဖို့ ကူညီနေတဲ့ ကုသိုလ်ဖြစ် အဖွဲ့အစည်း New Story တို့…
အိတ်ထောင်ထဲထည့်လိုက်ရုံနဲ့ကြိုးမဲ့အားသွင်းပေးမယ့် Snow-C စမတ်ဂျက်ကက်
နောက်ဆုံးမှာတော့ တစ်နေ့တစ်ခြားအလုပ်တွေနဲ့မအားလပ်လာတဲ့လူတွေအတွက် ၂၁ရာစု ဂျက်ကတ် တွေကအသင့်ဖြစ်နေပါပြီ။ တစ်နေ့တစ်နေ့အားသွင်းကြိုးတွေနဲ့ရှုပ်ယှက်ခတ်နေစရာမလိုတော့အောင် SNOW-C စမတ်ဂျတ်ကတ်လေးရောက်လာပါပြီ။ ကိုယ့်ရဲ့အိတ်ကပ်ထဲမှာကြိုးမဲ့အားသွင်းတဲ့ charger လိုမျိုးလုပ်ပေးမှာဖြစ်ပေမယ့် ဘက်ထရီထည့်ထားတယ်လို့တော့ ခံစားရစေမှာမဟုတ်ပါဘူး။ တစ်နေ့တာအတွက်တော့ ဘက်ထရီကုန်မှာပူစရာမလိုတော့ဘူးပေါ့။ Wireless…
စွန့်စားခန်းတွေကို ရင်ခုန်စွာကြည့်ရှုရမယ့် JUMANJI: Welcome To The Jungle
Jumanji ဆိုတဲ့ဇာတ်ကားလေးကတော့ ပရိတ်သတ်တွေနဲ့လည်း တော်တော်များများရင်းနှီးပြီးသားဖြစ်မှာပါ။ ဇာတ်လမ်းရဲ့အဓိကအကြောင်းအရာကတော့ ဆယ်ကျော်သက် ၄ယောက် ဗီဒီယိုဂိမ်းကစားရင်း ဂိမ်းထဲရောက်သွားပြီး စွန့်စားခန်းတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ရပြီးတဲ့နောက် လက်တွေ့ဘဝကိုပြန်လာဖို့ ကြိုးစားကြရတဲ့ဇာတ်ကားကောင်းလေးပါ။ ၁၉၉၆ ခုနှစ်တုန်းက လူတစ်ယောက် ကမ်းခြေကနေ…
အလင်းရောင် နည်းပါးတဲ့နေရာတွေမှာ ပုံကောင်းရဖို့ Smartphone Camera ဖြင့် ရိုက်ကူးနည်းများ
စမတ်ဖုန်းတွေရဲ့ နည်းပညာက တနေ့ထက် တနေ့ ပိုကောင်းအောင် တည်ဆောက်ပြီး Hardware ပိုင်းရဲ့ အသွင်အပြင်က ကိရိယာအသစ်တေါကို ထုတ်လုပ်နေကြပါတယ်။အခြေခံကျတဲ့ Hardware တခုအနေနဲ့ ပြောပါဆိုရင်တော့ အသုံးပြုသူတွေအတွက် ကင်မရာဟာ…
HOW TO Life Style NEWS TV & Home Entertainment
အိမ်ဖော်တစ်ယောက် လို အသုံးဝင်စေမယ့် စမတ်အဝတ်လျှော်စက်
အခုလာမယ့် CES 2017 ပွဲမှာ စတင်ကြော်ငြာမယ်လို့ ခန့်မှန်းထားကြတဲ့ ဆမ်ဆောင်း ရဲ့4in 1 လေးမျိုးသုံး အဝတ်လျှော်စက်ကို လူတော်တော်များများ က စိတ်ဝင်တစား…
Apple FEATURES HUBS Life Style Life Style NEWS
AirPods တွေပြုတ်မကျအောင် နားဖောက်ပြီး အကြံပိုင်တဲ့သူ
Apple ရဲ့ wireless AirPods တွေဟာ အခြားသော wireless နားကြပ်တွေလိုမျိုး နားမှာ ချိတ်လို့မရဘဲ ရိုးရိုးနားကြပ်တပ်သလိုသာ တပ်ထားလို့ရတဲ့အတွက် အခန့်မသင့်တဲ့အခါ၊ လျက်တပြက်လှုပ်ရှားမိတဲ့အခါမျိုးမှာ အောက်ကိုပြုတ်ကျနိုင်ပါတယ်။ ဒီပြဿနာကို…